China SPC Floor SM-020 Ukwakha kanye nefektri | I-Aolong
Ukwehliswa kwe-SPC yi-extruder kuhlanganiswe ne-T-type mold extrusion PVC substrate, enama-roller amathathu noma ama-roller amane womshini wokugoqa umshini wokugqoka we-PVC, ifilimu yombala we-PVC ne-PVC substrate, ukushisa kokushisa okukodwa, imikhiqizo ye-embossed, izidingo zenqubo kakhulu phezulu, ulingana ukushisa ukuqedela, awudingi iglue.
Izinto zokwakha phansi ze-SPC zisebenzisa ifomula enobungani bemvelo, engenazinsimbi ezisindayo, ama-phthalates, i-methanol nezinye izinto eziyingozi, ngokuhambisana namazinga we-GB4085-83.
Ukwehliswa kwe-SPC kudumile emazweni athuthukile nasezimakethe zase-Asia Pacific eYurophu nase-United States. Ngezinzuzo zayo ezinhle kakhulu zokusebenza kwemvelo i-SPC flooring ayixazululi nje kuphela inkinga yesikhunta sokhuni oluqinile phansi, kepha futhi ixazulula inkinga ye-formaldehyde yezinye izinto zokuhlobisa.
Ukufakwa kulula, ukwakhiwa okulula, akudingeki ukuthi ushaye i-keel yokhuni, umhlabathi awudingi ukwelashwa okungangenwa ngamanzi, awudingi inqubo yokwakha eyinkimbinkimbi, ugcine isikhathi sokufaka nezindleko. Akukho ukuqhekeka, akukho ukunwetshwa, akukho ukusonteka, akukho ukulungiswa nokulungiswa, okulula ukukuhlanza, ukonga izindleko zokulungisa nokugcina sekwephuzile. Umphumela wokumunca umsindo muhle, ukonga amandla kuhle, ukudlulisa ukushisa ukwahlukanisa okusheshayo kuhle, ukuze amandla asendlini asindise afike kuma-30%.
Imibala, khetha ezinhlobonhlobo zemibala, ehlukahlukene. Ifilimu le-SPC lisebenzisa ubuchwepheshe bokuphrinta obunencazelo ephezulu, lingabonisa ngokugcwele ukufudumala nobumnene besitezi sokhuni; Isitayela se-SPC sokwembathisa isikhala sicebile kakhulu, noma ngabe amaphethini wezinkuni namatshe athandwayo nezinye izitayela ezithandwayo, noma manje inkathi "yamaBuddha", sonke siyayihlonipha iphethini yemvelo, singaneliseka.
Langaphambilini Isitezi se-SPC 207
Olandelayo: SPC Phansi SM-021
SPC Phansi SM-026